पोखरा, भदौ २१–डेंगु महामारी फैलिएपछि एडिज एजिप्टाइ र एडिज एल्बो पिकस जातिको मच्छरको अण्डा, लार्भा र प्युपा नष्ट गर्न अभियान नै चलाए पनि पोखरामा डेंगु संक्रमितको संख्या बढेको बढ्यै छ । गत १६ साउनमा पोखरा(८, शिवालय चोकस्थित एक व्यक्तिमा देखा परेको डेंगुको संक्रमण एक महिनाको अवधिमा ७ सय ९१ जनामा पोजिटिभ देखिएको छ ।
डेंगु रोग नियन्त्रणको प्रयासमा पोखरा महानगरपालिकासहित पोखराका स्वास्थ्य कार्यालय, विभिन्न सामाजिक संस्थाले अभियान नै चलाएका छन् । तर पनि डेंगु संक्रमितको संख्या नघटेको हो । सरकारी तथ्याङ्कमा ७ सय ९१ जना डेंगु संक्रमित देखिए पनि पोखराका विभिन्न वडामा डेंगुको संक्रमणबाट करिब ११ सय मानिस प्रभावित भएको अनुमान गरिएको छ । कतिपय बिरामीले आफूलाई पायक पर्ने निजी अस्पताल, क्लिनिक र औषधि पसलबाट उपचार गराएका छन् जुन सरकारी तथ्याङ्कमा छैन । किनकि, उपचार गर्ने सबैको ल्याव परीक्षण गरिएको छैन । कतिपय विरामीलाई स्वास्थ्यकर्मीले लक्षणका आधारमा उपचार गर्दै आएका छन् ।
पोखरा महानगरपालिकासहित कास्की जिल्लाका अन्नपूर्ण, मादी, रुपा र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा समेत डेंगुको संक्रमण बढेको छ । पोखरा महानगरपालिकाका ३३ वडामध्ये ३२ वडामा यसको संक्रमण देखिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । पोखरामा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीमा कार्यरत १७ ट्राफिक प्रहरीमा पनि डेंगुको संक्रमण देखिएको छ ।
स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश कार्यालयका सूचना अधिकारी डा.भोजराज गौतमले पोखरामा डेंगुले भयावह रुप लिँदै गएको बताए । उनका अनुसार मानिसको जनघनत्व बढी रहेको पोखरा महानगरपालिकाका ८, ९, १० र १७ वडामा सबैभन्दा बढी डेंगुको संक्रमित देखिएका छन् । ‘दैनिक जसो डेंगुका बिरामीको सङख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘पोखरा क्षेत्रमा यो वर्ष हालसम्म ७ सय ९१ जनामा डेंगु पोजिटिभ देखिएको छ ।’
डेंगु संक्रमितहरुको उपचार पोखराका विभिन्न अस्पतालमा भइरहेको डा.गौतमले बताए । ‘पोखराका विभिन्न अस्पतालमा झुलसहित छुट्टै कोठामा राखेर डेंगुका बिरामीको उपचार भइरहेको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार १५ साउनमा पोखरा–८, शिवालयचोकका एक व्यक्तिमा डेंगुको संक्रमण भेटिएको थियो । पोखरा महानगरका ८ र ९ वडामा सबैभन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन् । यस्तै, पोखराका १, २, ४, ५, ६, १०, १७, २५ वडामा पनि डेंगु संक्रमित बढिरहेका छन् । महानगरका वडा नं ३२ मा भने अहिलेसम्म डेंगु संक्रमित नदेखिएको बताइएको छ ।
गत वर्ष पनि पोखरामा ५ सय ७१ जनामा डेंगु संक्रमण देखिएको थियो । लामखुट्टेको वृद्धि र संक्रमण गराउने उपयुक्त मौसम भएका कारण जोखिम अझै उच्च रहेको बताउँदै डा. गौतमले सावधानी अपनाउन सबैलाई आग्रह गरे । लामखुट्टेको बासस्थान नै नष्ट पार्नु डेंगुको प्रमुख रोकथाम भएको उनको भनाइ छ । कास्कीबाहेक गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत स्याङजा र तनहुँका केही व्यक्तिमा डेंगु भेटिएको डा. गौतमले बताए ।